22 / 08 / 2017 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Ogast 22, 2017
1 bilyan euro oo lagu maal-galiyo Iran ayaa ka yimid Baanka Adduunka ee waddooyinka tareenada
Bangiga Adduunka ayaa ogolaaday amaahda 1 bilyan euro ee Iiraan loogu talagalay khadadka tareenka tareenka Yusuf Geranpaşa, madaxa maamulka tareenka gobolka Iiraan, ayaa yidhi. [More ...]
Miyuu qiimaha qashinka elektirooniga ah ka helaa Alanya?
Doodda ku saabsan qiimaha Alanya Cable Car kaas oo la siinayo aagga Ehmedek ee ku dhexyaala qalcaddii Alanya ee dhererka 300 ee laga soo bilaabo Damlataş Beach ma nasan doono. [More ...]
Dumarka Fiktooriya ee ku wajahan dooddu waxay sii wadaan inay koraan
Dooda qiimaha Alanya Cable Car ayaa sii kordheysa! Doodda ku saabsan qiimaha Alanya Cable Car ee la siiyo deegaanka Ehmedek dhexdeeda ee qalcadda Alanya ee dhererka 300 ee laga soo bilaabo Damlata Dam Beach waa lama taabtaan. [More ...]
Mashruuca 'Accessible Project Kayseri' oo ka socda Kayseri Gawaarida.
Gawaarida Kayseri Inc. ayaa bilaabay “Mashruuca Helitaanka Bilaashka-Bilaashka ah ee waayeelka, dadka naafada ah ee u baahan wehel. Shaqaale loo xilsaarey baaxadda mashruucan, oo la bilaabay Juun 2017, ayaa ka caawisa muwaadiniinta arrimo badan. gaadiidka [More ...]
Gaadiidka cusub ee kooxda ee Kocaeli caasimadda ah ee Kocaelispor
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, waa mid ka mid ah magalooyinka ugu muhiimsan magaalada Kocaelispor'a cayaaraha guryaha iyo barokaca si loo bixiyo habka ugu fiican ee lagu bixiyo baska kooxda eber-kiilo kiiloo mitir ah. Ku fiicnaa Super League [More ...]
Kaalay, 86. Bandhigga Caalamiga ah ee İzmir
Bandhigga caalamiga ah ee '86.İzmir' waxaa lagu qabanqaabiyaa İZFAŞ oo hoos imaneysa Wasaaradda Dhaqaalaha inta u dhaxaysa 18-27 August oo ku taal Kültürpark oo ay weheliso waddanka ay iskaashanayaan Ruushka. Bandhigga Caalamiga ah ee Izmir halkaas oo dalka ay iskaashigu yihiin Xiriirka Ruushka iyo martida sharafta leh waa Muğla [More ...]
1500 Magaalo Dheer ah oo lagu daray Codsiga Gaadiidka Dadweynaha ee Moovit
Ku darista Dayton, Ohio ee Mareykanka waxay tilmaam u tahay taariikh muhiim u ah Moovit waxayna caddaynaysaa inay tahay barnaamijka keliya ee aad ugu baahan tahay gaadiid adduunka oo dhan. [More ...]
Dhismaha dhismaha ee Tramway ee ku yaala Düzce
Shaqooyinka loogu talo galay taraafikada wadada laamiga ah ee Istanbul, oo u xirneyd gawaarida gawaarida, ayaa la dadajiyay. Agaasinka Dawlada Hoose ee Duzce ee kooxaha Arimaha Sayniska ee Istanbul Street 950 mitir qeybta kanaalka ayaa furmay adkaynta shaqada wadada tareenka [More ...]
Dawladda Ingiriiska ayaa ku boorisay maalgashiga tareenka xawaaraha sare
Wasiirkii hore ee Maaliyada ee Ingiriiska George Osborne ayaa ugu yeedhay dawlada Ingiriiska inay maal gashato wado tareen xawaare sare leh oo isku xiri doona magaalooyinka Liverpool iyo Hull. Intii u dhaxeysay sanadihii 2010-2016 ee Ingriiska, dowladda xisbiga Conservative Party [More ...]
Tababar ku dhacay gobolka Pennsylvania ee Maraykanka, dhaawacmay 33
Magaalada Philadelphia, Pennsylvania, USA, 4 waxaa si xun loogu dhaawacay 33 wuxuu ku dhaawacmay shil sababay shil ka dhacay laba tareen oo ku yaal xarun tareen. Xafiiska Gaadiidka Dadweynaha ee Koonfur-bari Pennsylvania ee 00.15 waqtiga maxalliga ah [More ...]
New Generation Tareenka Xawaaraha Sare ee Shiinaha oo bilawday September!
Tareenka cusub ee xawaaraha sare, oo bilaabi doona duullimaadyada 2017 bisha Sebtembar, wuxuu yareyn doonaa muddada xNUMXkm u dhexeysa Beijing iyo Shanghai illaa afar iyo badh saacad. Marka loo eego wakaaladda rasmiga ah ee Xinhua, waxay leedahay xawaare dhan 1.250 km saacaddii. [More ...]
Kicinta musqulaha ayaa hoos loo dhigayaa Kocaeli
Kadib khariidadaha Kocaeli Noise ee ay diyaarisay Kocaeli Deegaanka iyo Koontaroolka Deegaanka ee Magaalada Kocaeli, tallaabooyinka la qaadayo marka la eego baaxadda Qorshayaasha Waxqabadka ee Sanca ayaa la shaaciyey. Hoolka Shirka Golaha Dawladaha Hoose iyo Magaalada [More ...]
Wasiirka Arslan: "15 352 billion pounds halkii sanno Gaadiidka Sector Investment Waxaan samee"
Wasiirka UDHR Arslan, "Turkey ma aha qandaraas ah mashaariicda waaweyn ee dunida, oo safafka sida qandaraaslaha, shaybaarka dalka qaaday, waxaa la arki karaa hinaaso." Arslan: "Waxaan ka warqaba riyada dadka our, waxaan ay qabtaan noo riyadan waayo, [More ...]
Duulimaadyo dheeraad ah oo YHT ah oo ku socda jidka Ankara-Istanbul ee Bayram Holiday
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa cadeeyay inay filayaan in wadooyinku ay noqdaan kuwa dad badan marka la barbar dhigo sanadihii hore maxaa yeelay ciidaha Ciidul Adxaa waxaa la keenay maalinta 10 waana maalinta ugu dambaysa ee fasaxa xilliyada. [More ...]